Kusukela ekufeni kuka-Elastix, kuze kube sekuzalweni kuka-Isabel | Kusuka kuLinux
Luigys toro | | I-GNU / Linux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sithole mayelana ne- ukuthenga I-Elastix ohlangothini lwenkampani 3CX, okubuye kwaletha nokutholakala kwe 3CX yeLinux esikhundleni senguqulo 5 ye I-Elastix. Ekuqaleni bekungabonakali kubucayi kakhulu, kepha njengoba izinsuku zihamba, inkampani 3CX yaqala ukuxosha amalungu omphakathi I-Elastix kanye nokwenza izenzo zokuvala ngokuphelele ikhodi.
Konke lokhu kusilethele ukunambitheka okungafanele emilonyeni yethu, ngoba sikholelwa ekutshalweni okuyimfihlo ukwenza ngcono nokwandisa amaphrojekthi, kodwa futhi sikholelwa ekuhlonipheni umsebenzi womphakathi kanye neminikelo yabasebenzisi. Asikwazi ukukhula, sisebenzise abanye, kuphoqelekile ukubuyisela ngandlela thile, abanikeze okuningi ukwenza amanye amaphrojekthi agcwaliseke.
Lapho ngiqala ukubhala le ndatshana, yonke into ikhonjisiwe ukwazisa ngokubonakala kwe- Imfoloko yakwa-Elastix ibizwa ngo-Isabel, enziwe ngumphakathi futhi ehlose ukuqinisekisa ukuthi umgwaqo omude ohanjiwe awulahlekile nokuthi ibuye igcinwe mahhala kubo bonke abasebenzisi. Lokho kuzoqhubeka nokuba ngenye yezinhloso zale ndatshana, kepha futhi kusinikeza nethuba lokukhombisa nokunikeza umbono ngezinto esikholwa ukuthi sinolwazi, ngoba siziphilele futhi siyaziphila.
Isizathu esikhulu sokuthenga iphrojekthi kufanele "Ukukholelwa kuye"Ngokuya ngalesi sitatimende, akumele sibeke eceleni izisekelo nezinhloso zoqobo, kufanele, ngangokunokwenzeka, sigcwalise umbono wakho ngemigomo iphrojekthi ebivele isimakiwe. Akuwona umsebenzi olula!, ngeke yamukelwe yiwo wonke umuntu, kepha kuyisinqumo okufanele usithathe futhi esizokuvumela ukuthi ugcine "empeleni" ukucaciswa kwephrojekthi yokuqala.
Akungabazeki ukuthi kulokhu kuseshwa kokuqedwa, uzoba nempumelelo futhi wehlule, into enkulu ukuthola indlela yokuthi iphrojekthi ithathe indlela yokukhula, lapho bengasebenzisana khona: imibono yoqobo, imibono emisha kanye nokugcinwa kwayo. Kuzofanele uthathe izinqumo ezithile, abaningi abazobona zingafanelekile, kungaba ngoba bengazijwayele noma ngoba zithinta ngqo imigomo yephrojekthi yokuqala, kulokhu, kubalulekile ukuqinisekisa ukusimama kwephrojekthi kanye ukuzwana phakathi kwezingxenye.
Okwamanje lapho uthenga iphrojekthi, ukholwa ukuthi umbono owusizo kuphela owakho nokuthi ngaphezu komsebenzi owuthengile kubantu, ngaleso sikhathi, yonke into yenzelwe ukuthi inyamalale futhi yakhe uhlu olude lwabaphikisi.
Ngikholwa wukuthi umphakathi wama-software wamahhala nawo kufanele unikele ukuze lawa maphrojekthi athathe indlela evumelana nawo wonke umuntu, azi ukuthi kokunye, abanikazi abasha bamane nje abafuni ukusebenzisana nomphakathi. Lokhu akunjalo ikakhulukazi ngeDesdeLinux, lapho sibheja khona konke, ukuze umphakathi uqhubeke nokusisiza ekutholeni isifundo lapho abafundi, abahleli, ababambisene nethimba bezizwa bekhululeke ngokuphelele.
1 Mayelana no-Elastix ongasekho
2 Ukubaluleka komphakathi
3 Ukubaluleka kwesoftware yamahhala
4 Phila imfoloko!
5 Mayelana no-Issabel osanda kuzalwa
6 impilo emva kokufa
Mayelana no-Elastix ongasekho
Ukubeka ngamafuphi Wikipedia:
«Ukuphela I-Elastix Kuyinto a PBX ngokuya ngesoftware evulekile, kulula ukuyifaka nokuphatha. Iqembu IP PBX, i-imeyili, imiyalezo esheshayo, ifekisi nemisebenzi yokusebenzisana. Ine-interface yewebhu futhi ifaka amakhono afana nesoftware yesikhungo sezingcingo enokudayela kokuqagela, konke kusebenza ngaphansi kweCentos.
Ukusebenza kwe-Elastix kusekelwe kumaphrojekthi wamahhala afana ne- asterisk, Mahhala, IHylaFAX, Umlilo ovulekile y I-Postfix. Lawa maphakheji ahlinzeka ngemisebenzi ye-PBX, ifeksi, ukuthumela imiyalezo kanye ne-imeyili ngokulandelana.
I-Elastix es Isofthiwe yamahhala futhi udedelwa ngaphansi kwe- Ilayisense Yomphakathi Jikelele ye-GNU«.
Impumelelo ende ye-Elastix namathuluzi amaningi wemithombo evulekile azungeze umphakathi, ngaphandle kwawo, ithuluzi belingeke libe nokubuyekezwa okuningi, ukulungiswa, ukulungiswa kanye nokwengezwa kokusebenza okusha. Kulesi simo esithile, umphakathi waba injini enkulu yokwenyusa, wakha yonke imvelo yabathuthukisi, abalondolozi, abaxhasi, abafaki, nezinkampani zokubonisana.
I-Elastix ithole emphakathini umxhasi wezomnotho, wokuziphatha kanye nolwazi, ngokwengxenye yawo, umphakathi wathandwa ngesisombululo esanikeza yonke induduzo ngokusetshenziswa kwawo. Lokhu kuzwana futhi kwenze indawo yokuba umphakathi uthandane nomkhiqizo ngakho-ke ukuwuvikela kuzo zonke izimo eziphakanyisiwe.
Lapho amathuba okuqhubeka nenkululeko yomkhiqizo evaliwe ngokuthanda kwakho, lowo mphakathi obukade ukhula isikhathi eside kangaka, unquma ngendlela ephephile futhi enesibindi yokuhlenga okwadalwa yiwo wonke umuntu nawo wonke umuntu. Kungumzuzu lapho isoftware yamahhala kumele iveze isizathu sayo sokuba khona, inkululeko yekhodi iyatholakala ukuze sithuthukise, sisebenzise, ​​senze intengiso kodwa futhi sivikele.
Ukubaluleka kwesoftware yamahhala
Isoftware yamahhala akuyona i-GNU / Linux kuphela, iLinux noma yini esifuna ukuyibiza ngayo (ukuthi abaningi sebevele bachazile okufanele sikubize ngakho, kanti abanye basho ukuthi kungani simane siyibiza ngokuthi iLinux nokuthi kungani kungafanele basibethele lokho), yi-ecosystem egxile emthonjeni ovulekile nethuba lokwazi ukuthi uhlelo lwenzani, luyithuthukise, luyisabalalise futhi luyisebenzise.
Kepha kufanele kucaciswe:
Yonke isoftware yamahhala ingumthombo ovulekile, kepha hhayi lonke uhlelo lomthombo ovulekile isoftware yamahhala. Umehluko usemalayisensini angasetshenziselwa uhlelo: amanye avumela kancane kunabanye futhi ayihloniphi kangako inkululeko yezisekelo zesoftware yamahhala.
Kulesi simo esithile I-Elastix Kwakumahhala futhi ilayisense yayo isivumela ukuthi: Sisebenzise, ​​sifunde, sishintshe, sisabalalise, sinikele futhi sithuthukise. Ngakho-ke isishiyele indlela evulekile ukuze umphakathi ukwazi ukuyithatha futhi uyenze eyayo, kusukela enguqulweni yayo yokugcina yamahhala.
«Una imfoloko (imfoloko ngesiNgisi), emkhakheni wokuthuthukiswa kwesoftware, ukwakhiwa kwephrojekthi kwenye indawo engeyona eyinhloko noma esemthethweni, kuthatha ikhodi yomthombo yephrojekthi ekhona. Igama lesiNgisi livame ukusetshenziswa. Njengomphumela we-bifurcation, amaphrojekthi ahlukahlukene angenziwa ahlanganisa izidingo ezahlukahlukene kepha ezifanayo.".
Izimfoloko bekungukusebenza okuvumele izinkulungwane zamaphrojekthi ukuthi aqondiswe ezindaweni ezihlukile, ngendlela efanayo, abe yisikhali esihle sokuvimbela amaphrojekthi angafi.Izimfoloko zingumphumela wokusetshenziswa kwenye yenkululeko eyisisekelo yesoftware yamahhala: ukufaka isandla emphakathini, ngokukhululeka kokwenza noma ukusabalalisa amakhophi ngezinguqulo zakho eziguquliwe zohlelo.
Ukwehluka kwezinqubo, ukusetshenziswa ezimweni ezahlukahlukene nokusetshenziswa kobuchwepheshe obuhlukile, kulapho imikhiqizo eminingi ephumelelayo namuhla ivelaphi. Kujwayelekile futhi ukuthi kuvele izimfoloko, emacaleni enhloso njengale esiphila nawo I-Elastix, lapho iphrojekthi yokuqala ivaliwe emphakathini futhi kungumphakathi onquma ukuyenza uqobo kusuka endaweni ethile futhi ngezinhloso ezisunguliwe.
Kunezinhlelo eziningi zamahhala ezaba ngabanikazi futhi ezadala ukuvela kwezimfoloko, eziningi zazo zagcina ziphumelela kakhulu kunamaphrojekthi wangempela, ngakho-ke ngaphandle kokungabaza, sekuyisikhathi sokusho Phila imfoloko!
Mayelana no-Issabel osanda kuzalwa
Futhi kusukela ekwenziwe ngasese okuphelele kwe- I-Elastix wavuka U-Isabel, imfoloko yomphakathi womphakathi, ozophatha ukuhlinzeka ngokuqhubeka, ukuthula nokusekelwa okudingekayo ukuze kuqhutshekwe nentuthuko yayo ye-PBX, ngosizo lochwepheshe, izinkampani, ababambisene nomphakathi wonkana.
U-Isabel Kuhloswe ngalo:
Ukudalwa, ukuqamba izinto ezintsha, ukwenziwa nokuhlanganiswa
Ukuze wazi okuningi ngaye, kufanelekile ukucaphuna UChristian cabrera:
«Akukho mininingwane eminingi evela ekhasini eliyinhloko, kepha kusuka kumazwana abanawo kweyabo izinkundla zokuxoxisana nakwabanye abaningi engibabonile ku-Twitter, ngicabanga ukuthi singacabanga okulandelayo:
Izosuselwa kuhlobo lwe-Elastix 4.0, ebelisebenzisa i-CentOS 7.
Kuzoba ukufaka esikhundleni kwe-Elastix, ngakho-ke kufanele ikwazi ukuvuselelwa ngendlela enesizalo (iguqula amakhosombe).
Indlela yekhodi kufanele ibe sobala kakhulu, ngoba manje kuzoba nendawo yokugcina evulekile eGithub yokulawula nokuqapha ushintsho.
Izokwakhiwa kusuka emphakathini, ngaphandle kwebhizinisi elilodwa elisekelwa ngemuva (ngokungafani no-Elastix umxhasi wakhe uPalosanto eyalele zonke izinguquko nezinkomba okumele zilandelwe).«
Futhi emva kokufa kuzokwenzekani? futhi sonke sizothi i Impilo yonke!… Kokubili empilweni yethu kanye nasesoftware yamahhala, kunemibuzo eminingi nobunzima obuvela ekufeni, ikusasa esifuna ukuvela lisezandleni zethu.
Uma isoftware yamahhala isinikeza okuthile, kungenzeka ukubona impilo emva kokufa, masinakekele ukuba yibona abahlakulela izimangaliso zokuvuselela amaphrojekthi okwakukholakala ukuthi afile. Masiqonde futhi sinikele ukuze isoftware yamahhala ibe ukunyakaza okuya ngokuya kube namandla, lapho kuthinteka khona amathuba okufunda, ukukhula, ukuqonda nokwabelana.
Ngifuna ukuvala le ndatshana ende, siphinde siqinisekise ukuzibophezela kwethu emphakathini, sithathe amaphutha amaningi esiwenzile futhi sinikeze nethuba lokuba yingxenye yale phrojekthi eqhubeka nokugwedla yize kunamagagasi. Abahlanganyeli bethu bayayazi imizamo eminingi eyenziwa nsuku zonke, futhi bayabuqonda ubukhulu bokuzibophezela kwabo futhi ngaphezu kwakho konke bayakwazisa ukuphawula nokwazisa kwabafundi bethu.
Masibe yingxenye yomphakathi, masishiye umehluko emuva, asihlanganise ngazo zonke izindlela, ukuze ngokubekezela, ukubamba iqhaza kanye nokubuyiselwa kolwazi, sibe umphakathi okhululeka ngokwengeziwe lapho sonke sizizwa sikhululekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Kusukela ekufeni kuka-Elastix, kuze kube sekuzalweni kuka-Isabel
I-athikili enhle. Ubhalisele i-RSS isikhathi eside, ngithanda ukubona ukuthi yize ikhwalithi yama-athikili yehla isikhathi eside (impela futhi), ulitholile ikhwalithi yawo.
Ngithanda futhi ukuthi uyibheke njengezindatshana zangempela (izincwadi zesayensi) okungenani ekwakhekeni kwayo kanye nenkomba yayo nakho konke ekuqaleni 🙂
Qhubeka njalo, ikhwalithi igcina iveza i-niche.
Ngiyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho, abaluleke kakhulu kithi ... Nsuku zonke sizama ukudala izindatshana ezingcono futhi ezingcono zawo wonke umuntu, sizungezile nabantu abaziyo abakwenzayo, ngakho-ke sinethemba lokuvula izinyathelo .
Ikakhulukazi umqondo wokuthi kusivumela ukuthi sizalwe kabusha amaphrojekthi okwakukholakala ukuthi afile. Ngiyethemba sonke sinethezekile.
Ngamanye amagama, manje sizokwenza u-Isabel akhule, ukuthi kwenziwa kanjani nge-elastix, ukuze kuthi kamuva bathengise inkampani bese beba mbalwa. Ngalokho uqhubeka ne-freepbx futhi yilokho kuphela.
Isoftware yamahhala isinikeza inkululeko yokwenza okungcono kakhulu, umphakathi omusha uhlose ukuzimela ngaphandle kwabaxhasi futhi ukhule uqondiswe ngumphakathi.Kuzosa kuphele bese sizobona.
Yingakho uMrmagu echaza ukuthi manje u-Issabel ngeke aboshelwe enkampanini, njengo-Elastix kuPalosanto.
Enye yezinzuzo zesoftware yamahhala ukuthi umbono ungagcinwa uphila, noma ngabe unezingqinamba kanjani, ungafa futhi uzalwe kabusha ube ngcono, ukubingelela nokuziqhenya ngokuba ngowomphakathi ongathengiswa.
Labo abathemba isinyathelo sezinkampani ezizimele bangithukuthelisa kakhulu kunezinkampani ezizimele. Ukucabanga ukuthi izinkampani ezizimele zizobafaka kuphrojekthi yabo kubonakala kimi njengesenzo sokuqina kunokukhathazeka manje. Ukucabanga ukuthi umuntu oyimfihlo uzonakekela izintshisekelo zakho noma uzokubandakanya ukuthi "wabelane ngokuthile" kungafana nokucabanga ukuthi impungushe ngeke ihlasele izimvu ngoba nje lezi zingavikelekile, lezi zindaba ziyadabukisa, hhayi ngoba kwenzeke kepha kunalokho kungenxa yokungazi lutho kwabantu abaningi.
Izinkampani ezizimele zifuna inzuzo kuphela futhi azinikeli lutho nge-Free Software, azinandaba nhlobo, zibona nje ama-jerks amaningi ezingakwazi ukugoqa futhi zithathe ucezu lwephrojekthi yazo.
Inkampani ezimele izokutshela noma yini ukuthi ibe nekhodi futhi ithole lonke ulwazi, bese ikuthumela kuma-shit, ikukhahlela embongolweni futhi yilokho, isivele ikudlile, lokhu kusebenza kanjalo.
Inkampani neLa Moral kufakazelwa umhlaba wonke, bayisa ekukhahleleni okudala.
Ngamafuphi, akukho okusha emkhakheni wokuzijabulisa.
Ukutshalwa kwezimali kwangasese kungesinye sezizathu eziyisisekelo zokuthi kungani isoftware yamahhala ne-GNU / Linux kuyilokhu okuyikho, icala elithile kakhulu ukuthi ngenxa yokutshalwa kwezimali kwangasese namuhla singaba nezibuyekezo ezinhle kangaka kuCore Linux, ngoba ngukutshalwa kwemali kwabaxhasi okuvumela ithimba lezentuthuko ukuthi lizinikele ngokuphelele kulo.
Futhi sibonga utshalomali oluzimele lweRed Hat singaba nentuthuko yomibili ezingeni leseva, noma isibonelo i-ERP engiyisebenzisayo futhi ngiyayithanda i-Idempiere ekhululekile ngokuphelele, ikhulile futhi iyaqhubeka nokukhula ngoba kukhona abatshalizimali abazimele abaxhasa ukwakhiwa kwamamojula futhi izixazululo.
Kumele sibeke eceleni isiko lakho konke kumahhala, noma okubi nakakhulu, ukuthi i-Free Software iyisososhiyali ngakho-ke, kufanele siyisabalalise phakathi kwabo bonke ilungelo elilodwa, isoftware yamahhala ayihambelani neyamahhala futhi ingukutshalwa kwemali okuyimfihlo okuyisisekelo amaphrojekthi wamahhala.
Ake sibone, into eyodwa ngumxhasi wangasese otshala imali noma ochwepheshe ukwenza umkhiqizo we-openource, enye into ehluke kakhulu ukuthenga inkampani noma ukuthengisa enkampanini ezinikele ngokufana ncamashi nawe, kunokuyifaka Umhlaba weLinux wawungcono ngokuthenga okuthile okunengqondo kunokuqala ekuqaleni. Kuyacaca ukuthi ngeke babe nabo bonke abasebenzi futhi ngeke bagcine iphrojekthi futhi bayigcine, futhi ngendlela umuntu ancintisana naye asuswa ngayo kuye, yize kimi i-elastix iyinto ebudlabha kakhulu emakethe.
Umphakathi wakwa-Elastix wenza le phrojekthi yakhula futhi uPalosanto wayisebenzisa ngokunenzuzo enkulu ukwenza umkhiqizo nokuthatha eminye imikhiqizo eminingi, uma sengiyithathile into elula kakhulu ukuyithengisa. Abathengisi bezitolo bazinikele ekwenzeni imali kuphela ngokwesibonelo, kude nokukhulisa umphakathi wakwa-Elastix. Manje bafuna ukuhambisa i-niche ku-Issabel futhi ngemuva kwalaba bantu abafanayo be-rosewood, okungukuthi, ngaphandle kokuzigcaba ngesiliva, manje bafuna ukuthatha omunye umkhiqizo ukwenza okufanayo ngokuqinisekile. Ngikusho lokhu ngoba ngithole i-imeyili ngqo ivela kwa-Elastix México…. kwenzekani ngengozi cha?
Odin mojica kusho
Inzuzo yokusebenzisa amalayisense wamahhala ivumela ukuthi kwenziwe amaphrojekthi, yize izinkampani eziningi, ngokuya ngezintshisekelo zazo, njengeMicrosoft uqobo enikela ku-kernel ngoba inzuzo yayo emakethe iyayiphoqa futhi ingokoqobo, njengokukhangisa kwayo okukhohlisayo kwe- "Microsoft Uthanda iLinux ", kanye nezinye izinkampani, ukusebenzisa amalayisense wamahhala kusivumela ukuthi siqhubeke nokuqhubekela phambili, ubusoshiyali noma cha, wonke umuntu anganikela kule misebenzi, ubunjalo bayo buyayivumela, ayibandakanyi noma ngubani. Isoftware yamahhala isuselwa ekwabelaneni nasekuvikeleni inkululeko yabasebenzisi, okuyindlela enhle yokuvula umthombo, okhohlwa leyo ngxenye.
Umsebenzi omuhle wawo wonke umuntu kumaphrojekthi wesoftware wamahhala ngamunye usigcina siqhubekela phambili. Isoftware ende emide namalayisense ayivikelayo.
Phendula u-Odin Mojica
URaspadian Yamil kusho
Ubuzenzisi obuningi kokunye ukuphawula. Ngifisa ukwazi ukuthi uma uMnu Magu uma efaka isoftware yamahhala kumuntu othile, ukwenzela mahhala ukuze isoftware yamahhala isabalale. Abaningi bavikela isoftware yamahhala ngokwenza sengathi itholakala mahhala ukuze ungafaki isandla sakho ephaketheni kodwa ufake imali kuyo ungaphumi kuyo. Noma ingabe isoftware yamahhala iyinhlangano yabaphili abaphila ngaphandle komoya futhi abafisa okuhle nokuthula kuphela nokuthi wonke umuntu une-software futhi enze konke kube mnandi, kufakwe mahhala, kusebenze mahhala? Wonke umuntu kufanele aphile ngokuthile, futhi uPalosanto akufanele agxekwe ngoba babeka izigidi ezimbalwa zamadola etafuleni lakhe ukuthenga lo msebenzi. Abakwenzile bebenelayisense yamahhala futhi nanamuhla isekhona, nanamuhla usengathatha i-ISO ufake i-Elastix bese uyisebenzisa.
Abaningi baphila kulokho futhi bazophila ngalokho, kungani begxeka iPalosanto? Noma ingabe wonke umuntu olanda i-ISO kusuka ku-elastix bese eyifaka ukwenza lokho ukuthanda uthando lobuciko nokunikela ngokuzinikela emphakathini futhi angazuzi kukho? Qaphela ubuzenzisi ...
Phendula kuRaspadian Yamil
USergio Cortes kusho
Kuhle kakhulu, kulezi zinyanga bengizwe okuncane kakhulu nge-issabel futhi ngithathe i-elastix enkulu yabafileyo, ilungele umphakathi, impumelelo kule phrojekthi.
Phendula uSergio Cortes
Ukubhala okuhle kakhulu, ngihlala njalo ngibheka isiza kusuka ku-Linux.net, lena yisoftware yokuyihlola. Sengivele ngibheka indlela enhle yokuqamba kabusha emhlabeni wethu.
Iqiniso ukuthi angiyithandi i-3cx, i-elastix ibibukeka njengokukhohlisa kimi, ngoba lokho kungcono ukusebenzisa i-freepbx esebenza kangcono kune-elastix, kepha imbangela yalokhu akuyona i-3cx enikeze isamba nemibandela ethile, lapha Icala lingumninimasheya omkhulu kunabo bonke we-elastix waseColombia, ongashiyanga nje kuphela ukweleta imali ezinkampanini ezakha i-software ye-elastix kodwa futhi wanikeza nesibibithwane ngokwenzeka ngephrojekthi nakubantu ayenabo iminyaka esebenza naye, hhayi lokho kuphela ukhathalele okuncane kakhulu ngomphakathi owethule ukuthi ube yisithangami esaziwa kakhulu se-PBX emhlabeni esengene.
Manje ngiyabuza, Isabel ngeke ifane kakhulu?
URaspadian Yamil - faka isoftware yamahhala mahhala?
Ucabanga ukuthi ungubani? abantu abasebenzeli mahhala futhi akekho AMABUTHO WOMPHAKATHI umphakathi owenza isoftware yamahhala, isoftware leyo, noma ngabe ikhululeke kanjani, ayenziwanga mahhala njengoba okuningi kukhokhelwa ngokukhangisa.
Futhi ubiza ukuzenzisa ukuthi kungani umuntu ekhokhisa ukufaka isoftware? Ukuthi abathuthukisi bakwenze kube lula ukuyifaka futhi ngakho-ke wonke umuntu angayifaka ngokuchofoza okukodwa njengoba kwenziwa nge-software ethengiswa yi-microsoft, okuwukuphela kokuzenzisa lapha nguwe, ukuphawula kwakho akusizi isoftware yamahhala.
Kude neqiniso futhi ikakhulukazi kusuka eqinisweni!
I-Elastix ayikaze ibe uhlelo olususelwa ngqo kwi-asterisk Core, yilokho ISIKHUMU esasiyikho njalo, lapho iSangoma ithola iFreePBX, lokhu, iSangoma yababeka eJake, noma bayayivala noma ngibamangalele.
I-Elastix ibihlale iyi-SKIN yesikhumba ku-FreePBX ephelelwe yisikhathi ene-Asterisk Core engaphephile ngokweqile futhi enye yeCore eboshwe kakhulu emhlabeni weTelematics.
Namuhla kuzalwa u-Issabel, ofana no-Elastix, okuwukuphela kwento eshintshile yi-CentOS, ukusuka lapho kuye phambili, ifana ncamashi ne-Elastix, iqina elinamandla, ligcwele amazeze, futhi futhi okunye ukwakheka.
Ekugcineni, isisho sithi, "Noma uMona egqoka usilika, uMona uhlala"
Isizinda sewebhu kusho
I-athikili enhle kakhulu, ngiyabonga!
Lawula i-Spotify kusuka kukhonsoli ngePytify